बाँदर आतंकले निसीखोला – ४ का स्थानीयवासी चिन्तामा ! – ebaglung.com
बाँदर आतंकले निसीखोला – ४ का स्थानीयवासी चिन्तामा !
२०७४ मंसिर २३, शनिबार १८:२५	Top News, थप समाचार
झरना कँडेल बुर्तिवाङ २०७४ मंसिर २३ । निसीखोला गाउपालिमा वडा नम्बर चारमा रहेको ओखरेनी, किनारे, सेलबाङमा बादर आतंक मच्कच्चिएको छ । घरको अन्नपातहरु बाँदरले छरीदीने तथा खाईदिन थालेपछि त्यहाका किसान चिन्तामा परेका छन ।
बादरले झोंता पारेर कौशीमा राखिएको मकै झुक्याएर आएर खाईदीने तथा नास गरिदिने तथा घर। भित्रै रहेको कोदो , गहुँ ,तथा चामल जस्ता अन्नपातहरु खाईदिने तथा छरीदिने गरेकोले त्याहाँका स्थानियबासी मर्कामा परेका हुन् । बिशेष गरी , जीरी र कीनारेमा बादरले आतंक मच्याएको घनश्याम कंडेलले बताए ।
गाउँघरमा मेलापात गर्नुपर्ने मानिसहरुलाई चटारो रहेपनि , घरको एकजना बादर कुरुवा भएर बस्नैपर्ने बाध्यता रहेको छ, स्थानीय किसान हिरा कंडेलले भने, बादर कतिखेर आउँछ र धपाउँला भनि सजग भएर बस्नुपर्छ । कताबाट आएर खाईदिन्छ , पत्तै हुदैन , घर बाहिर मात्रै नभई घर भित्रै पसेर सम्पुर्ण पात नष्ट गरि दिएको उनले बताए ।
करीब ३०० भन्दा बढी घरधुरी रहेको बडानं ४ का बासीन्दालाई यसरी दिन दहाडै बादरले दु:ख दिने गरेको छ । बारै महिना बिभीन्न प्रकारका अन्नपात हरुको नास गरीदिने भएकाले त्यहाँका किसान चिन्तीत रहेको घनश्याम कंडेलले जानाकारी दिए।
गरीबले पनि चुनाव जित्न सक्छ भन्ने उदाहरण दिए माओवादी केन्द्रका उमेदवार पन्थीले